ပိုးစာသီး (Mulberry) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » ပိုးစာသီး (Mulberry)	16
Posted by Foolish Girl on Aug 7, 2015 in Food, Drink & Recipes | 16 comments
Folish Girl ရဲ့မှတ်စု
ပိုးစာသီး လို့ခေါ်တဲ့ (Mulberry)
ပိုးစာသီးဆိုတာ ပိုးစာပင်ကရတဲ့အသီးပါ။ ပိုးစာပင်က ခုလူတွေဝတ်နေတဲ့ပိုးထည်တွေထုတ်ပေးတဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့အစာပင်မို့ပိုးစာပင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပိုးကောင်လေးတွေကအရွက်ကိုပဲစားတာပါ။ အသီးတွေကိုတော့လူတွေစားလို့ရပါတယ်။ ပိုးစာသီးကအနီရောင်ရှိတဲ့အသီးဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားအနီရောင်အသီးတွေလိုပဲ အဟာရဓါတ်ပေးပါတယ်။ သွေးအားကိုဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သံဓါတ်ချို့တဲ့ပြီးသွေးအားနည်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပြီး အအေးမိခြင်းကိုလည်းကြိုတင်ကာကွယ်စေပါတယ်။ ပိုးစာသီးလေးများကို မြန်မာပြည်မှာတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရောင်းချစားသုံးတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။ ပြည်ပမှာတော့ ပိုးစာသီးများကို ယိုအဖြစ်တမျိုး အချိုရည်အဖြစ်တစ်ဖုံပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ပိုးစာသီးအရောင်ပြောင်းလဲပုံမှာ အစိမ်းရောင် မှ အနီရောင် ၊ အနီရောင်မှ ခရမ်းရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းရောင်ဖြစ်သွားပါက စားလို့ရပါပြီ။ ပိုးစာပင်တွေကိုတော့ အပူပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့ရခဲပါတယ်။
Ma Ei says: ပိုးစာသီးလေးတွေက အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပြီး အအေးမိခြင်းကိုလည်းကြိုတင်ကာကွယ်စေပါတယ်။ ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားတယ်တော့
အပင်စိုက်ထားချင်လိုက်တာ… အဲ့ အပင်က အသီးလေးတွေ သီးလာရင် လှလှပပ အသီးလေးဆိုတော့ ခူးရက်ပါ့မလားမသိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .မေမြို့မှာသိပ်ပေါပေါ့
.ကျုပ်ငယ်ငယ်ကမေမြို့မှာနေတုန်းက ကန်တော်ကြီးအရှေ့ဖက်မှာ .ပိုးစာခြံရှိတယ်…ပိုးမွေးမြူ ရေးခြံလည်းရှိတယ်…ခုတော့ရှိမရှိမသိတော့
Foolish Girl says: ပိုးချည်စက်ရုံတွေ အရင်ကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတယ် ပိုးစာတွေ။ပိုးချည်တွေကို တောင်သူတွေဆီကနေဈေးနှိမ်ပြီး နိုင်ငံခြားကို အမြတ်များများနဲ့သွင်းကြတော့ တောင်သူတွေအနေနဲ့ဘာမှမကျန်လို့လုပ်ငန်းရပ်သွားတယ်လို့ကြားဖူးတယ်
Foolish Girl says: အပေါ်ကပုံနှစ်ပုံက ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာပါ ကျန်တဲ့ပုံတွေက Google က Mulberry ပုံတွေပါနော် ဂျိုင့်အပြည့်ခူးထားတဲ့ပိုးစာသီးတွေကိုတထိုင်တည်းကုန်အောင်စားရတာတောင်စားလို့မ၀ဘူး :D
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခု သိသွားပြီ။
အောင် မိုးသူ says: ရန်ကန်ုမှာ စိုက်လို့ရသလားမသိ။ စိုက်ချင်မိတယ်။ ဘလက်ဘယ်ရီနဲ့ မတူဘူးလားလို့ မေးချင်တယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘလက်ဘယ်ရီ က သတ်သတ်
ရာ့(စ)(ပ) ဘယ်ရီက သတ်သတ် တဲ့။
Raspberries grow aroundacentral nub, or “torus,” that stays on the plant when the berries are picked. Notice the hollow fruit.
Black raspberries are hollow when picked, just like their red siblings
Golden raspberries are also hollow when picked
Blackberries look like raspberries, but are not ripe when they’re red.
Blackberries do not have the same hollow center as raspberries when picked. Instead, they are solid fruit.
Mulberries grow on thorn-free trees, and may be ripe when red. They are also much longer than blackberries.
Foolish Girl says: ရန်ကုန်မှာ ပိုးစာပင်တွေ့ဘူးတယ် ဒါပေမယ့် အသီးတော့သီးတာမတွေ့ဘူး၊ Berry သီးတွေက ပုံစံတွေဆင်သလိုလိုဖြစ်ပေမယ့် သူတို့အပင်ပုံစံမတူကြဘူး၊ City Mart မှာ ဆိုရင် Mulberry တော့မတွေ့ဘူးပေမယ့် နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ Berry (red, black, blue)သီးတွေ ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ရတယ် မြန်မာပြည်မှာလဲ Berry သီးတွေရှိတာပဲ အဲဒါတွေကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမှာဘဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: အဲသည့် ပိုးစာသီး (Mulberry) ကို ကြေနေအောင်ချေပြီး…
အစေ့တွေ အဖတ်တွေစစ်ထုတ် ၊ အရည်သန့်သန့်ကိုယူ…
သစ်ကြမ်းပိုးမှုန့် အပါအဝင် ဟင်းခတ် အဆာပလာတွေနဲ့စီမံ…
ဝက်နံရိုးကို အဲသည့်အရည်ထဲ ထည့်နှပ်ထားပြီး ကင်စားကြည့်ပါ…
အလွန့်အလွန် အရသာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ဝက်နံကင် ရပါမည်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အူးကျောက်ကို ဆရာတင်ဘာတယ်။
Foolish Girl says: လုပ်စားကြည့်ပါဦးမယ် ဦးကျောက်ခဲရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: Mulberry ကိုတောက်လျှောက်.. Blackberry ထင်နေတာ…
ပိုးစာသီးလို့.. မြန်မာလိုခေါ်မှန်းလည်း.. အခုမှသိ…
အဲဒီအသီးကို.. အသီးခင်းထဲ.. တခါဝင် ၁၈ဒေါ်လှပေးပြီး.. တထိုင်ထဲခူး..ရေတောင်မဆေးပဲ.. အ၀စားဖူးပါ့..။
သိသလောက်ဘယ်ရီအသီးတွေ.. အကုန်လိုလို.. ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်..။
မြန်မာတွေ.. နေ့စဉ်အစားအစာထဲ.. ဓလေ့အဖြစ်ထည့်စားသင့်လှတယ်..။
export လုပ်ရင်လည်း.. အခြောက်ဖြစ်စေဦးဈေးကောင်းရသမို့.. ဘယ်ရီစိုက်ခင်းတွေထောင်သင့်လှတယ်..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. အဲဒီပိုးစာသီး.. အပါအ၀င်.. ဘယ်ရီသီးတွေက.. နေ့စဉ်စားအစားအစာထဲတနည်းမဟုတ်…တနည်းပါသဗျ..။
ခုတလော.. ဓတ်ကျပြီး…၀ယ်ဝယ်သောက်ဖြစ်နေတာ..Acai Berry အသီးကထွက်တဲ့ဖျော်ရည်…
အဲဒီဖျော်ရည်ဗူးမှာ.. အမေဇုံတောပြုန်းတာကို… ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့.. အဲဒီအမေဇုံတောထဲကအသီးကို.. စီးပွားဖြစ်တင်ပို့ရောင်းချတာမို့.. တောခုတ်တောင်သူားတွေအလုပ်ရပြီး.. တောခုတ်တာတဖက်တလမ်းက.. အကာအကွယ်ရတယ်လို့.. ရေးထားတယ်..။
အဲဒီ အဆိုင်အိဘယ်ရီသီးက.. အုန်းပင်လိုအပင်ကသီးတာ…
မြန်မာပြည်မယ်ရှိမရှိမသိ… သူလည်း.. ဘယ်ရီနွယ်ဝင်အသီးတမျိုးဖြစ်ပါကြောင်း…
manawphyulay says: ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ဖောလစ်အက်ဆစ်မသောက်ပဲ ဒီပိုးစားသီးတွေ စားရင်ကော ရလားဟင်… ၀ယ်လို့ရရင်ကောင်းမယ်။ တစ်ခါမှတော့ မစားဖူးသေးဘူး။
CharTooLan says: ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံက ဘယ်ဒေသကလဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆို ဘူးနဲ့တဘူးလောက်ရန်ကုန်ပို့ဖို့မှာချင်တယ်
Foolish Girl says: ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့မှာပါ
Thint Aye Yeik says: အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် မစားဖူးသေးဘူးဗျ။
ကျနော်က စားဖူးသမျှလေးထဲက ကြိုက်မိတဲ့အသီး တစ်မျိုးနှစ်မျိုးထဲမှာပဲ ပိတ်မိနေပြီး အဲ့သလောက်ကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ စားမိနေတာမျိုး။
ဥပမာ ပိုးစာသီးနဲ့ ပိန္နဲသီး ဘယ်ဟာစားမလဲလို့ ရွေးခိုင်းရင် ကြိုက်တဲ့အသီး ပိန္နဲကိုပဲ ဆွဲစားမိတာမျိုးဆိုပါတော့။ စိတ်ကိုက အဲ့လို။
အနီရောင် အသီးတွေကို စားချင်စိတ်ရှိတယ်။ အနီရောင် အသီးတွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးနှစ်ခုက ဖရဲသီးနဲ့ခရမ်းချဉ်သီး။
ပိုးစာသီးလည်း စားတော့ အကြည့်ချင်သား